Sosialy Archives - Page 112 sur 154 -
Hopitaly HJRA : 150 isa isan’andro no mpanome ra an-tsitrapo
15/06/2017 admintriatra 0
Raha ny zava-misy sy hita mbola malaina ny Malagasy amin’ny fanomezana ra an-tsitrapo. Nanaporofo izany ny atontan’isa nomen’ny talen’ny ivotoerana misahana ny famindrana ra, Profesora Andriamanantany, fa mbola 25 isan-jaton’ny Malagasy manerana ny Nosy ihany …Tohiny
Fetin’ny fahaleovantena : Hitety toerana maro eto an-drenivohitra ny « Podium »
14/06/2017 admintriatra 0
Efa mivolon’andro fety ny eto an-tanàna amin’ny fanomanana ny fetin’ny fahaleovantena. Ankoatra ny fety isan-tokantrano, tsy mitsahatra ny manolotra fialamboly ho an’ny vahoaka malagasy ny fitondrana amin’ny fiatrehina ny fetim-pirenena. Hanomboka ny 21 jona izao, …Tohiny
Ambovombe sy Amboasary : Fianakaviana 326 nahazo “Vatsy Fiarovagnajaja”
13/06/2017 admintriatra 0
Nampitontongana ny toe-karena teo amin’ireo tokantrano tena marefo tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy iny ny fiovaovan’ny toetr’andro nateraky ny tranga El nino. Nanimba ireo zaza efa miaina ao anatin’ny fotoan-tsarotra tao anatin’ny fotoana fohy izany, …Tohiny
Voafonja ao Antanimora : Notoloran’ny vadin’ny Filoha bodofotsy miisa 3.000
12/06/2017 admintriatra 0
Herinandro vitsivitsy taorian’ny nandalovan’ny vadin’ny Filoham-pirenena,Voahangy Rajaonarimampianina, tany amin’ny fonjan’Antanimora, dia niverina tany an-toerana indray ny ekipany nanolotra fanomezana. Ho avy tokoa mantsy ny fetin’ny Ray, ary maro an’isa ireo raim-pianakaviana no voafonja any an-toerana. …Tohiny
Andramena tatsy Singapour : 25 janoary hatramin’ ny 10 mey 2014, iza no nanana ny fahefana?
Namoaka lahatsoraka an-gazety ny MLE omaly izay manendrikendrika an’ i Mbola Rajaonah ho tompon’antoka voalohany tamin’ ny trafika andramena tatsy Singapour. Nefa tamin’ny fotoana nisian’ io raharaha Andramena io, dia mbola mpandraharaha tsotra tsy niditra ...Tohiny
Tompona “Radio” nopotehan’ny Tetezamita : MBOLA TSY TAFARINA 8 TAONA ATY AORIANA
Hery Rajaonarimampianina : « Mbola tsy ho tapitra ny fanamby… »
Kianjan’ny Maki Andohatapenaka : Hitsangana ny trano fampiofanana ara-panatanjahantena